Taariikh nololeedka Fidel Castro | shumis.net
Home » Layaab » Taariikh nololeedka Fidel Castro
Taariikh nololeedka Fidel Castro
Fidel Castro ayaa dalka Cuba hoggaanka u hayay muddo nus qarni ah iyadoo xisbigiisa oo kaliya uu dalkaasi ka talinayay.
Xilli shuuciyaddu ay sii dhaceysay caalamka oo dhan, ayaa calanka Casrto ee casaanka ah waxa uu ka ag babanayay Mareykanka oo ahaa cadowgiisa ugu weyn.
Taageerayaashiisa ayaa ku ammaana in uu ahaa askariga siyaasiga ah ee dadka reer Cuba u soo gacan geliyay dhulkooda isla markaana ka guuleystay mabda'a hantiwadaagga.
Balse waxa uu wajahayay eedeymo ah in uu cabburinayay mucaaradkiisa isla markaana uu dhiirigelinayay siyaasado curyaamiyay dhaqaalaha dalkaasi.
Fidel Alejandro Castro Ruz waxa uu dhashay 13-kii bishii Agoosto ee sanadkii 1926, waxa uuna ka soo jeedaa qoys beeroley maalqabeen ah oo ka soo haajiray dalka Spain.
Hooyadii Lina Ruz González waxaa addoonsi u haystay aabihii oo ay uga shaqayn jirtay beertiisa kaddibna waxa ayna noqotay xaaskiisa kaddib markii ay dhashay Fidel Castro.
Hoggamiyihii hore Cuba Fidel Castro ayaa geeriyooday
Batista ayaa waxa uu taageero ka haystay Mareykanka.
Castro ayaa waxbarashadiisii ka billaabay iskuulada lagu dhigo madaahiibta katooligga ee masiixiga basle markii dambe waxa uu ku guuldareystay in uu waxbarashadaasi heer ka gaaro, waxa uuna wakhtigiisa dhan geliyay ciyaaraha.
Isaga oo jaamacadda Havana arday ka ah ayaa bartamihii 1940-meeyadii waxa uu noqday nin u ololeeya arrimaha siyaasadda, waxa uuna noqday aftahan.
Castro waxa uu siyaasaddiisa ku bartilmaameedsaday madaxweynihii Cuba ee xilligaasi Ramon Grau oo xukuumaddiisu ay wajahaysay eedeymo musuqmaasuq.
Dibadbaxyo rabshado wata ayaa dalka ka curtay, waxaana Castro uu noqday bartilmaameedka booliska.
Waxa uu sidoo kale qayb ka ahaa qorshe la doonayay in lagu afgambiyo hoggaamiyaha garabka midig ee Dominican Republic, Rafael Trujillo, balse qorshahaasi ayaa fashilmay kaddib markii uu Mareykanka soo farageliyay.
Waa Castro su'aalo la weydiinayo weerarka kaddib.
Castro ayaa xabsiga la dhigay kaddib markii uu weerar fashilmay ku qaaday saldhigga ciidamada ee Moncada Garrison sanadkii 1953.
Sanadkii 1952 ayaa Fulgencio Batista waxa uu weerar ku qaaday dowladda, waxa uuna afgambiyay madaxweyne Carlos Prío.
Castro waxa uu sameystay dhaqdhaqaaq si hoose uga shaqeeya sidii loo inqilaabi lahaa dowladda Batista, waxa uuna bishii Luuliyo ee saandkii 1953 qaaday weerar fashilmay oo uu ku doonayay in uu hub ku furto.
Waxa uuna ka mid noqday maxaabiistii dagaalkaasi lagu qabtay, waxaana lagu xukumay 15 sano oo xabsi ah.
Sanadkii 1955 ayuu cafis ku soo baxay waxa uuna u cararay dalka Mexico, haseyeeshe sanad kaddib ayuu dalka ku soo laabtay, waxa uuna saldhig ka dhigtay buuraleyda Sierra Maestra, halkaasi oo muddo labo sano ah uu ka jabhadeynayay.
1959 ayay ciidamada Castro waxa ay gudaha u soo galeen magaalada Havana.
Labadii bishii Janaayo ee sanadkii 1959 ayaa fallaagadiisu waxa ay gudaha u galeen caasimadda Cuba ee Havana, arrintaa oo Batista ku khasabtay in uu dalka ka cararo.
Boqolaal ka tirsan taageerayaasha Batista ayaa la khaarijiyay kaddib markii maxkamad la soo taagay.
Dowladdii uu Castro madaxweynaha ka ahaa ayaa markiiba ballanqaaday in dalka gacanta loo gelinayo dadkii lahaa, isla markaana ay difaacayso xuquuqda dadkeeda saboolka ah.
Haseyeeshee isla markiiba dalka waxaa lagu soo rogay hannaanka siyaasadeed ee halka xisbi, waxaana xabsiga la dhigay boqolaal qof, halka kumanaan u badan dadka hantiilayaasha ahi ay dalka isaga qaxeen.
Sanadkii 1960 ayaa Castro waxa uu dhammaan ganacsigii dadka Mareykanka ah ay ku lahaayeen dalkiisa ku wareejiyay dadka reer Cuba.
Mareykanka ayaa arrintaa uga jawaabay xayiraad ganacsi oo ka dhan ah Cuba, xayiraadaa oo soo gaartay ilaa qarnigii 21-aad.
Sanadkii 1961 ayaa Mareykanka waxa uu damcay in uu afgambiyo dowladda Castro basle arrintaasi ayaa guul darro ku dhamaatay.
Fidel Castro leaps from a tank
Castro waxa uu qayb ka qaatay weerarka Havana lagu soo galay.
Kaddib CIA-da Mareykanka ayaa isku dayday in ay khaarajiso Castro oo xitaa waxa ay isku dayday in la siiyo sigaar laga soo buuxiyay walxaha qarxa, si uu qaraxa ugu dhinto.
Inakstoo Cuba ay xayiraado dhaqaale saarnaayeen, haddana waxa uu dalkaasi gaaray guulo badan, waxaana shacabkiisa u suurtagashay in ay helaan daryeel caafimaad oo lacag la'aan ah.
31-dii bishii Luuliyo sanadkii 2006 ayuu Castro si kumeel gaar ah xukunka ugu wareejiyay walaalkii Raul kaddib markii lagu sameeyay qalliin dhanka xiidmaha ah, waxaana sii xumaaday caafimaadkiisa ilaa uu sanadkii 2008-dii rasmiyan xukunka u wareehjiyo.
Dhammaadkii sanadkii 2014-kii ayaa madaxweyne Obama waxa uu shaaciyay in Cuba laga qaadayo xayiraadaha saarnaa muddada nus qarniga ah.
Fidel Castro aad ayuu u soo dhaweeyay arrintaasi waxa uuna ku tilmaamay tallaabo wanaagsan oo lagu xasilinayo gobolka basle waxa uu wali shaki ka muujiyay Mareykanka oo uu sheegay in aan la aamini karin.
Inkastoo dad badan oo reer Cuba ah ay nacayb badan u hayaan Castro, haddana waxaa jira dad kale oo aad u badan oo Castro aad u jecel, waxa ayna u arkaan halyay.
Title: Taariikh nololeedka Fidel Castro
Posted by Unknown, Published at November 26, 2016 and have 0 comments